Mj Rodriguez Manatevin-daharana an'i Maya Rudolph amin'ny andiana hatsikana vaovao | Avy amin'ny mac aho
Mj Rodriguez Teams Miaraka amin'i Maya Rudolph Ho an'ny Andian-tsarimihetsika vaovao
Michaela Jae, fantatra ihany koa amin'ny hoe MJ Rodríguez, fantatra tamin'ny nahazoany loka tamin'ny "Pose" an'i Netflix dia nanao sonia andiany hatsikana Apple TV + mbola tsy misy lohateny hoe Maya Rudolph. Araka ny notaterin'ny gazety manam-pahaizana manokana Fe-potoana, Mj Rodríguez dia hiaka-tsehatra amin'i Rudolph hatsikana antsasak'adiny noforonin'i Alan Yang sy Matt Hubbard.
Apple dia manohy mamokatra atiny. Manomboka matotra ity, fantatsika fa mbola lavitra ny lalana, fa avy eo ny atiny aterinao dia vaovao ary araky ny lazainay hatrany dia misy kalitao. Mety ho tianao bebe kokoa na latsaka, fa ny hainay mazava dia ny mamelona azy amin'ny famokarana vaovao, zavatra iray izay ankasitrahana. Ity farany dia toa hatsikana tantara an-tsehatra mpilalao sarimihetsika roa tsara.
Rudolph milalao Molly, vehivavy iray izay toa lavorary ny fiainany dia naka fihodinana mahery taorian'ny nandaozan'ny vadiny azy "tsy misy mihoatra ny" $ 87.000 miliara. I Rodríguez dia handray ny andraikitr'i Sofía, talen'ny ekipa mpanatanteraka miasa mafy amin'ny fikambanana tsy mitady tombom-barotra vatsian'i Molly. Fantatray fa i Apple dia efa nahazo ny zon'ny andiany tamin'ny volana martsa. Na izany aza, mbola tsy mahalala na inona na inona isika momba ny daty famotsorana na ny tsara kokoa, ny daty hanombohana ny famokarana.
I Rodríguez tamin'ny taona 2019 no lasa vehivavy trans voalohany nahazo ny loka ho an'ny mpilalao sarimihetsika amin'ny fahitalavitra tsara indrindra tao Mari-pankasitrahana sary. Talohan'ny "Pose" dia nilalao anjara tamin'ny "Nurse Jackie" sy "Luke Cage" i Rodriguez ary nilalao tamin'ny horonantsary tsy miankina "Saturday Church."
Ny hatsikana Apple TV + starring Rudolph sy Rodriguez dia nosoratana, noforonina ary novokarin'i Yang sy Hubbard, samy mpandresy loka Emmy. Yang dia niasa tamin'ny "Master of none" sy ny Apple TV + manokana "Little America." Raha nanoratra fizarana "30 Rock", "Parks and Recreation" ary "Forever" i Hubbard.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Mj Rodriguez Teams Miaraka amin'i Maya Rudolph Ho an'ny Andian-tsarimihetsika vaovao
Ny fanandramana izay mampiseho fa ny AirTag dia ambony noho ny tile
Ao anatin'ny AirTags, fandefasana iMac ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho